नेपाल ‘एसिया कप’मा छनोट हुने सम्भावना कति? यस्तो छ अबको यात्रा - Akhabarpati.com
नेपाल ‘एसिया कप’मा छनोट हुने सम्भावना कति? यस्तो छ अबको यात्रा
२०७८ जेष्ठ २५ गते, मंगलवार प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वकप छनोटअन्तर्गत जोर्डनसँग पराजित भए पनि सन् २०२३ को एसियन कप खेल्ने नेपालको सम्भावना जिवितै रहेको छ ।
समूह ‘बी’ मा रहेको नेपालले अब अष्ट्रेलियासँग अन्तिम खेल खेल्न बाँकी छ ।
समूहमा पाँचौ हार बेहोरेपछि नेपाल आफ्नो समूहमा चौथो हुने पक्का भएको छ । यस समूहमा अष्ट्रेलिया लगातार ६ खेल जित्दै १८ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने नेपाललाई पराजित गरेको जोर्डन १३ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।
कुवेत १० अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
अब नेपालको यात्रा
समूह एचमा रहेको उत्तर कोरियाले कोरोनाको कारण नाम फिर्ता लिएपछि प्लेअफका लागि अब ११ टिम मात्र हुनेछ । उत्तर कोरियाले नाम फिर्ता लिएपछि हरेक समूहमा दोस्रो हुने र पाँचौ हुने तथा चौथो हुने र पाँचौ हुने टिमबीचको नतिजा र त्यसको अंक गणना हुनेछैन ।
त्यसैले नेपालले दुई खेल जित्दै ६ अंक जोडे पनि त्यो अन्तिम स्थानको चाइनिज ताइपेई विरुद्ध भएकोले तेस्रो चरणमा जानका लागि नेपालको त्यो अंक गणना हुनेछैन ।
अहिलेसम्म आयोजक चीनसँगै छनोट चरण पार गरेका जापान, कतार र सिरिया एसिया कपका लागि छनोट भइसकेका छन् । यस्तै जापान र सिरिया विश्वकपका लागि तेस्रो चरणको छनोटमा प्रवेश गरेका छन् ।
कतार आयोजकको नाताले सिधै विश्वकपमा छनोट भइसकेको छ । त्यसैले कतारबाहेक बाँकी ७ समूहको विजेता र उपविजेतामध्ये उत्कृष्ट ५ गरी कुल १२ टिम एसियाबाट विश्वकपका लागि तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्नेछन् ।
कुवेतको जाफेर अल–अह्मद अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा भएको खेलमा जोडर्नसँग ३–० ले पराजित भएको हो। यो हारसँगै अंक तालिकमा चौथो स्थानमा रहेको नेपालको विश्वकपका लागि छनोटबाट बाहिरिएको छ।
समूह ‘बी’मा रहेको नेपालको ९ अंक छ। त्यस्तै, समूहको शीर्षस्थानमा रहेको अस्ट्रेलियाको १८, जोर्डनको १३, कुवेतको १० अंक छ भने चाइनिज ताइपेइले अंक जोड्न सकेको छैन।
समूहको शीर्ष दुई टिम अस्ट्रेलिया र जोर्डन एसियन कपको तेस्रो चरणको छनोटका खेल्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै, समूहको तेस्रो नम्बरमा रहेको कुवेत पनि एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएको छ भने समूह उपविजेता हुने सम्भावना पनि रहेको छ।
समूहको चौथो स्थानमा रहेको नेपाल विश्वकप छनोटबाट त बाहिरएको छ नै अब एसियन कप खेल्नका लागि पनि प्ले-अफ राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।
विषाक्त मदिरा सेवनबाट आठ जनानको मृत्यु